सिंहदरबार भित्रै कस्ले चलायो गो’लि ? – My Blog
सिंहदरबार भित्रै कस्ले चलायो गो’लि ?
No Comments on सिंहदरबार भित्रै कस्ले चलायो गो’लि ?
चेकजाँचको क्रममा आज मध्याह्नमा सिंहदरबारभित्र एक रा’उण्ड गो ली फा यर भएको छ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको निजी सुरक्षा गार्ड प्रहरी सहायक निरीक्षक अनुपमा भारतीको साथमा रहेको पे’स्तोलबाट एक रा’उण्ड गो’ली फा’यर भएको हो । संसद् सचिवालयको भवन नम्बर २ मा उक्त घटना भएको र त्यसबाट मानवीय क्षति नभएको जनाइएको छ ।
डियुटी सकेर पे’स्तो’ल चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त गो ली फा’यर प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो ।
यो पनि : बाटोमा खाल्डा देखेपछि आक्रोशित सिडिओले भने- पक्राउ पुर्जी जारी गर्छु
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) काशीराज दाहालले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई पक्राउ पुर्जी काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अलपत्र अवस्थामा छोडेका तथा बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेका योजनाको अनुगमनका क्रममा निस्किएका सिडिओ दाहाले उक्त चेतावनी दिएका हुन् ।
← पाल्पाकी २४ वर्षीया सीताले जन्माइन् एकै पटकमा चार सन्तान → एकाबिहानै नेपालका बहुचर्चित ब्याक्तिको निधन